ကြက်သား ကောက်ညှင်းပေါင်း | Wutyee Food House
« ကိုရီးယား ငါးရှဉ့်ကင်
May 3, 2010 by chowutyee ကြက်သား ကောက်ညှင်းပေါင်း ကောက်ညှင်းဆန်အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ကောက်ညှင်းဆန် – ၅၀၀ဂရမ်
၂။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၃။ ပဲငံပြာရည်အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၄။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၆။ ရေ – RiceCooker မှာပါတဲ့ ဆန်ချိန်ခွက်သေး တစ်ခွက်
၇။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၈။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၁ခု (အစောင်းပါးပါးလှီးပါ)
၂။ ကြက်အူချောင်း – ၃ချောင်း (အစောင်းပါးပါးလှီးပါ)
၃။ မှိုခြောက်ပွင့်အမဲ – ၄ခု (ရေနွေးဖြင့် နူအောင်ပြုတ်ပေးပြီး အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
၄။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – လက်ဖက်၇ည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၇။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၉။ ကော်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ကောက်ညှင်းဆန်များကို ရေဖြင့် ဆေးပြီး ရေထဲ ၃နာရီ စိမ်ထားပေးပါ။ မှတ်ချက် (၃နာရီထပ် ကြော်ပြီး ကောက်ညှင်းဆန်များကို ရေမစိပ်ပါနှင့်)
၂။ ၃နာရီပြည့်လျှင် ကောက်ညှင်းဆန်များကို ဇကာဖြင့် ရေပြန်စစ်ပြီး ကောက်ညှင်းဆန်အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်များဖြစ်သော (ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ နှမ်းဆီ၊ ဆီ၊ ရေ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) အားလုံးဖြင့် သမအောင် နုယ်ပေးပြီး နာရီဝက်ခန့် နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ အစားသွပ်ရန် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ကြက်သား၊ ကြက်အူချောင်း၊ မှိုခြောက်၊ သကြား၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ နှမ်းဆီ၊ ကော်မှုန့် ) အားလုံးကို လည်း နုယ်ပြီး နာရီဝက်ခန့် နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် နုပ်ထားသော ကောက်ညှင်းဆန် နှင့် အစားသွပ်ရန်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ရောနယ်လိုက်ပါ။
၅။ ပြီးမှ စတီခွက်ကြီး တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ပေါင်းအိုးဖြင့် ကောက်ညှင်းဆန်များ ကျက်သည်အထိ ၁နာရီ ကျော်အထိ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါင်းပေးပါ။
၆။ ကြက်သားကောက်ညှင်းပေါင်းလေးကို မြိန်ရှပ်စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
on May 3, 2010 at 1:39 pm | Reply hmone
oh sar chin like tar…..yummmmmmmmmmmmmyyyyy😉 love that food
on May 3, 2010 at 2:58 pm | Reply chowutyee
hee Thanks Hmone Gyi yay!!🙂
on May 4, 2010 at 2:24 am | Reply mee chit
on May 4, 2010 at 8:07 am | Reply chowutyee
on May 10, 2010 at 6:10 am | Reply ငယ်လေး
တော်တော်စားကောင်းမဲ့ပုံပဲ.. သွားရည်တောင် ယိုလာပြီ..
ကျေးဇူးပဲ မ၀တ်ရည်ရေ.. ^^
on May 10, 2010 at 12:13 pm | Reply chowutyee
လုပ်စားကြည့်ပါနော် ငယ်လေးရေ.. တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်..🙂
on August 9, 2010 at 6:55 am | Reply lyk
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ .. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကျေးဇူးနဲ့ ဒီဆိုက်ဒ်ကို ၀င်ဖြစ်ခဲ့တာပါ .. တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုက်ဒ်ကလေးတခုပါပဲ .. အခု .. ကြက်ကောက်ညှင်းပေါင်းဆို .. ဖတ်ရင်းနဲ့သွားရေတောင်ကျလာတယ် .. အများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ .. အမြဲအားပေးနေပါ့မယ် ..
on August 9, 2010 at 10:01 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါနော်.. နောက်ထပ် ဟင်းတွေ အများကြီး ဆက်တင်သွားပေးပါမယ်…😉
on October 25, 2010 at 6:54 am | Reply pam
။ ပြီးမှ စတီခွက်ကြီး တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ပေါင်းအိုးဖြင့် ကောက်ညှင်းဆန်များ ကျက်သည်အထိ ၁နာရီ ကျော်အထိ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါင်းပေးပါ။
Can you tell me what kind of cup?
on November 4, 2010 at 2:11 am | Reply chowutyee
pam ရေ ခွက်ဆိုတာ ကောက်ညင်းဆံ့ရုံ အပူခံနိုင်တဲ့ ဘယ်ခွက်မဆို ရပါတယ်။ အပူခံနိုင်ပြီ ကိုယ်ချက်မည့် ကောက်ညှင်းဆံ့ရင် ရပါတယ်။ ဟင်းချို ကြွေပန်းကန်လုံးထဲ ထည့်ပေါင်းလည်း အဆင်ပြေပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ..😀
on November 29, 2010 at 10:50 am | Reply moe
thanks alot my sister lay wutye.
I tried2times already that sticky rice
very delisious ……..:P
really so nice ,look like our boss bring from malas: (they said that lik this ) but I think so I do my self is better ,,hee,,,:D
on December 17, 2010 at 5:27 am | Reply chowutyee
Thanks Ma Moe too!
on November 30, 2010 at 12:23 am | Reply wai
မ၀တ်ရည်ရေ ကောက်ညှင်းကိုမပေါင်းပဲနဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာ ထည့်ချက်လို့ရလား ဟင် ကျေးဇူးနော်
on December 17, 2010 at 5:28 am | Reply chowutyee
Wai ရေတစ်ချို့ ထမင်းအိုးတွေကလည်း ပေါင်းတဲ့ systemပါရင် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ..😀
on December 15, 2010 at 2:39 am | Reply ko nyein
Can use white or brown sticky rice?Thanks.
ကောက်ညှင်းဆန်အဖြူကို သုံးရမှာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါနော်…
on August 18, 2013 at 10:20 am | Reply Kppa